Depiote Harijaona Randriarimala : “Aza atao takalon’aina ny mpianatra ” -
AccueilRaharaham-pirenenaDepiote Harijaona Randriarimala : “Aza atao takalon’aina ny mpianatra ”
30/05/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ao anatin’ny telo volana fahatelo tanteraka ny taom-pianarana amin’izao fotoana izao. Fotoana hamitana ny fandaharam-pianarana sy hanaovana famerenana. Izany hoe, fotoana tena saropady ho an’ny sehatry ny fampianarana. Rehefa migadona ihany koa ity telo volana farany ity, dia efa mananontanona any koa ny fanadinana. Volana kely sisa mantsy no isaina dia higadona ny fanadinam-panjakana ka tsy tokony hisy intsony amin’izao ny fahatapahan’ny fampianarana, na amin’ny alalan’ny inona izany, na amin’ny alalan’ny inona. Mifanohitra amin’izay tanteraka anefa no miseho eto amin’ny firenena ankehitriny. Ankoatra ireo mpampianatra mitokona tsy mety mampianatra eny anivon’ny lisea tsy mijery ny tombontsoan’ny zana-bahoaka mantsy dia mitokona ihany koa ny eo amin’ny sendikan’ny mpampianatra mba hanelingelina ny fampianarana. Rariny noho izany, raha mijoro ireo solombavambahoakan’i Madagasikara, toa ny Randriarimalala Harijaona na John Elite ho an’ny tombontsoan’ny zaza malagasy.
Ity farany izay nilaza tamin’ireo sendika omaly, teny amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, ny tsy fetezan’ny fitokonana nataon’ireo sendika amin’izao fanadinana efa manakaiky izao. “Aza atao takalon’aina ny mpianatra”, hoy izy. Ny fanadinam-panjakana efa fantatra fa tsy hihemotra amin’ity taona ity, kanefa dia mbola tadiavin’ireo olona sasany hokorontanina. Handeha hamonjy ny lapan’ny Tsimbazaza ny Depiote Harijaona Randriarimalala, omaly, no tratry ny fitohanana, ka nihazo ny lalana nankany ambadiky ny LMA Ampefiloha iny. Akory anefa ny hagagany fa mbola nitohana izay tsy izy koa ny tao. Noho ny fitokonan’ireo sendikan’ny Mpampianatra no anton’ilay fitokonana. Amin’ny maha mpitondra tenin’ny vahoaka azy, dia tsy nihambahamba izy niditra an-tsehatra nifampiresaka tamin’ireto sendika ireto. “Misy koa ny olona te-hampianatra ny zanany. Sady manelingelina ireo te-hiasa ao amin’ny minisitera ny fitokonana ataonareo ka tokony hajaina ireo te-hiasa. Tadidio fa io minisitera io tsy misahana ny sekolim-panjakana ihany fa koa ny sekoly tsy miankina. Ireo zanantsika nandoa saram-pianarana ireo tsy afaka averina ny volany rehefa tsy misy ny fanadinana. Ireny olona ireny te-hampianatra ny zanany, ary milofo sy mandany fotoana andro aman’alina mitady vola hampianarana ny zanany nefa dia helingelenina ohatra izao”, hoy ity solombavambahoakan’i Madagasikara, lany teny Atsimondrano ity.
Fihetsika mendrika tokoa izao nasehon’ny depiote Harijaona Randriarimalala izao, satria sahy mijoro ho an’ny tombontsoan’ny mpianatra malagasy.
Nivondrona, niray feo, niara-nanatanteraka valandresaka ho an’ny mpanao gazety omaly tetsy amin’ny trano maitson’Anosikely ireo senatera avy eto Antananarivo sy ny solontena avy amin’ny faritra, izay nilaza fa manohitra tanteraka ny hetsika fanakorontanana ny firenena ...Tohiny